HARIIROO ISAANII KEESSATTI DUDHAALEE CIMDOOTNI AFIRIKAA GAA’ELAAN TOKKO TA’AN HOJIITTI HIIKUU QABAN. – Beekan Guluma Erena
HARIIROO ISAANII KEESSATTI DUDHAALEE CIMDOOTNI AFIRIKAA GAA’ELAAN TOKKO TA’AN HOJIITTI HIIKUU QABAN.	Beekan Erena
Poems July 14, 2016OROMO
83SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
HARIIROO ISAANII KEESSATTI DUDHAALEE CIMDOOTNI AFIRIKAA GAA’ELAAN TOKKO TA’AN HOJIITTI HIIKUU QABAN.
Gaa’elii akkuma kollejii ykn dhaabbilee biroo seeraaf ittin bulmaata mataa isaa qabaa. Garuu cimdootnii AfIrikaa gaa’elaan tokko ta’an fuuldura fooyya’e qabaachuuf irra caalaa maal gochuu qabuu? Armaan gadditti Seera gaa’eelaa cimdootni Afirikaa hojiitti hiikuu qaban waliin ilaalla.
Hub: seerri akkuma jijjiiramu qajeelfamnii tokkoo cimdiiwwan hundaaf hojjechuu dhiisuu nii mala. Cimdileen lammaan walii galuun akkuma jirutti ta’ee seeroota armaan gadditti eeraman beekuun walitti dhufeenya keessan cimsuun akka isiin wal dhabdee silaa uumamu malu hambistaniif isin gargaara.
1) TAPHA DHUMAA IRRATTI WALII GALUU DANDA’UU.
Gaa’elli kee maaliif akka dhaabbatu barbaadaa? Akka cimdii gaa’elaa tokkootti,maatitti ykn akka hiriyaa gaaritti maal raawwachuuf abdatte jirtaa? Gaaffileen kunneen jalqabumaan deebii argachuu qabu.Fkn’f bara jireenya kee guutuu eessa jiraachuuf karoorfatEE? Atiif ijoolleen kee amantaa kam hordooftuu fi dhimoota barbaachisoo biro. Taphaa dhumaa warri jedhaman kunneen ganamumaan kan murteeffamuu qabaniif onnee wal madeessuufi wal hubachuu dhabuu hir’isuuf dha. Dhimma gurguddaa irrattii mari’achuuf qophii ta’uu qabda. Garuu dhimma waliin irratti mari’attan kana lamaan keessan itti walii galuu keessan sirriitti mirkaneeffadhaa.
2) NAMA SADAFFA AKKAMIIN AKKA KEESSUMEESSUUQABDU FILADHU.
Jaallattus jibbitus namni saddafaan dhimaa gaa’elaa kee keessa seenuuf yeroo hundaa balbala kee irra nii dhaabbataa. Yaada nama biraan ga’eela kee geggesuun garuu waan balaa guddaa baatee jirudha. Balbala gaa’elaa kee dura kan jiru maatiis ta’uu qaama hawwaasaa kan biroon walitti dhufeenya ati gaa’ela kee keessatti qabduu diiguu nii danda’uu. Atiif hiriyyaan gaa’elaa kee garuu seeraa sirriidha jettanii fudhattan,kan isiniif gammachuu kennuu malee kan isin dallansiisuun nama kan biraa gammachiisuu fudhachuu hin qabdan.
3) HAMMAM WALIRRA AKKA BARBAADDANIIF WALIIF LAACHUU AKKA DANDEESSAN ADDA BAASUUN BEEKA.
Walquunnamtiin saalaa gaa’ela keessatti waan baay’ee barbaachisaa ta’e dha. Hammaam walirra inni isin barbaaddan garuu kan gaa’ela nama kan biraa irraa addaa ta’u mala. Atiif hiriyaaan gaa’elaa kee hammam walirraa akka barbaaddan irratti waliif amanamoo ta’uu qabdu. Dhimma hundaa irratti waliin mari’achiif iftoomina qabaachuu qabdu. Waa’ee walquunnamtii saala irratti waan tokko isin godhu barbaduun akka walitti isin araarsu gochuun akkumaa dhimma kan biraa waan ga’eela keessaniif barbaachisaa ta’edha.
4) GAA’ELAA KEE RABBITTI LAADHUU.
Maatiin rabbiin kadhatu yeroo hundaa nii dursaa. Seenaa amantaa keessanii waliin mari’adhaa. Waa’ee gaa’ela keessanii hammam akka kadhattaniifi amantaa kam waliin akka hordoftaniis waliin mari’adhaa. Walitti dhufeenya keessan itti fufsiisuuf dhimma baay’ee barbaachisaa ta’edha kun. Ijjooleen keessaan amantaa kam yeroo guddattan akka hordofuu qaban irrattilee walii galuu hin dagatinaa.
5) DHIMMA DHUUNFAA TO’ANOO JALA OOLCHUU.
Maatii hunduu gaa’elaa isaatti seera mataa isaa waan qabuuf kan maatii tokkoo isa kaaniif dirqama haa hojjetu jechuun hin danda’amuu. Dhimma dhuunfaa ykn iccitii gaa’ela keessan keessa jiru nama biraan hin mari’atin. Rakkoon maallaqaa yeroo si quunnamuu enyuttuu gargaarsaaf hin fiigiin, ijjooleen kees nama isaan itti hiiquu qaban adda baasii. Kun maatiin kee dhimma dhuunfaa isaanii utuu alaa namnii bitaa isaan galchu ittii hin dhufiin rakkoo mataa isaanii ofiin akka furataniif gargaaraan.
Temesgen Atnafu Mulatu
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa83SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← Anamoo hunduma marachaa??-Abdii Guuttataa Dilgaasaa Oromiyaarra
Qurxama jaalalaa!-Fiixabaas Habroo’tiin →